I-Rice starch yengezwa izithelo nemifino ihlanzekile ukwenza amazambane ahlambulukile akhululeke. Uma imifino noma izithelo zitholakala esimweni se-mash, kukhishwa amanzi amaningi futhi uma kufakwa isitashi esivumela ukuthi amanzi angaphezu kwamanzi afinyelele kumuntu oyifunayo. Khona-ke amazambane ahlambulukile azobukeka ekhangayo futhi angasuki kulesi sipuni. Isitashi sisetshenziselwa ukugaya kahle kwezithelo.
Isitashi sigcwele ngokuphelele isisu somntwana futhi sithuthukise umsebenzi wayo. Isitembu esiswini sakha ifilimu, ivikela isenzo se-acrosive acids, esiqukethe izithelo eziluhlaza. Ukubekezelela kahle izingane ezisanda kuzalwa, omama abaningi baseYurophu baqala ukunikeza izithelo ezihlanzekile nge-starch kakade ezinyangeni ezingu-4. I-Rice starch ayikho iphunga futhi inambitha, ayithinti ukunambitheka kwalo mkhiqizo. Embizeni ngayinye, isitashi sikhona esilinganisweni esincane esingaba ngu-6%. Iphakheji lokudla kwezingane kufanele liphawulwe "I-BIO". Lesi sithonjana siyisiqinisekiso sokuthi ukudla kwenziwa ngaphandle kwama-GMO, ama-dyes, ama-nitrate nama-pesticides nezinye izinto eziyingozi.
Ukwethemba noma ukungathembi isitashi, ukukhetha kubazali. Khetha imikhiqizo yabakhiqizi abanjalo abaye bafakazela emakethe. Khona-ke imikhiqizo ewusizo kanye neyomusa kuphela izowa etafuleni.
Ummbila noma umsila welayisi ukhona nokudla kwezingane.
Isitashi ngumkhiqizo ofanele.
Phezu kokucwenga, isitashi siyaguqulwa sibe yi-glucose.
Ukutholakala kwalo kwezinye izinhlobo zezithelo nezitshalo zemifino kuyamqinisekisa ingane emthonjeni obuthakathaka.
Abakhiqizi abaningi benza imizamo emikhulu yokulinganisela umphumela ohlukumezayo nonenzuzo wezithelo eziqukethe ama-acids. Bese ungasebenzisi izinhlobo ezinomsoco zezithelo, kanti isitashi asinakho i-acids.
Ekuphetheni, sinezela ukuthi ekudleni kwezingane, isitashi siyadingeka ukuze kulungiswe kahle imifino nezithelo futhi kuvikela isisu somntwana kusuka e-acids enobudlova.
Ukudla kanye nokubusa kwabantwana kusukela ngonyaka owodwa kuya kokubili
Ingabe izithelo zingathinta ukuthuthukiswa kwengane?
Ukulimala kokudla okufudumele
Ngimaphi amaswidi engingayinika ingane?
Ukupheka kwabantu ngokunakekela iso
Ukukhetha ifenisha yokulala
Ikhekhe le-chocolate nge-pecans
Ubuhlobo phakathi komfana nentombazane: izikhathi ezinzima
Yini okufanele ngiyenze ngaphambi kokuba ngihambe ngokudla?
Yimuphi umuthi omuhle ongakhetha kuwo?
Izinyathelo ezintathu zokuthandana nomuntu: izinzuzo nezingozi
Isimo sokuphila - isimo somzali